Masar oo ku gacan seertay amaah oga timid bangiga aduunka – SBC
Masar oo ku gacan seertay amaah oga timid bangiga aduunka
Cairo:- Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dalka Masar haweenyda lagu magcaabo Faa’iso Abu Najaa ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda Masar ay ugu gacan seertay amaah uga timid bangiga adduunka sababo la xiriira wax aan ku haboonayn maslaxada qaranka.
Wasiirada ayaa intaas ku dartay in xukuumadda haatan ka jirta Masar　u hogaansamayn shuruud kasta oo katimaada (world Bank) bangiga adduunka islamarkaana ay mudnaanta siinayso maslaxadda dalka wax kale ka hor wixii kdambeeyey kacdoonkii lagu riday madaxweynihii hore Xusni Mubaarak.
Wasiirada oo ka hadlaysay amaah Masar oga imanaysa sunduuqa lacagta adduunka ayaa sheegtay in jiraan wadahadalo u socda wasaaradda maaliyadda iyo sunduuqa lacagta adduunka (IMF) oo ku aadan heshiis 12 bilood soconaya balse aysan saxiixin ilaa iyo hadda sababo la xiriiro shuruudaha qaarkood.
Dhanka kale wasiiradda ayaa shaaca ka qaaday in dowladda sucuudigu ay ku deeqday dalka Masar amaah gaaraysa laba boqol oo malyan oo dollar oo loogu talagalay mashuruucyada yar yar iyo kuwa dhexe.
Wargeyska wall street ayaa qoray toddobaadkii la soo dhaafay in dalka Masar ay kajirto jahwareer la xiriira sababta dowladda mareykanka ay shaaca uga qaaday in ay taageero maaliyadeed u fidinayso marxaladda kalaguurka.
Dowladda mareykanka ayaa sheegtay sida ay qoreen wargeysyada ka soo baxa dalka Masar in ay ugu deeqayso dalka Masar 100 malyan oo dollar si loo maalgeliyo mashaariic horumarineed iyo barnaamijyo kale oo ku kacaya 65 malyan oo dollar si loo horumariyo dimuqaraadiyadda Masar iyo arrimaha xuquuqda aadanaha.